तीन तहमा हाम्रो मन। यसले, हामीलाई के फाईदा? – नयाँ प्रहर
तीन तहमा हाम्रो मन। यसले, हामीलाई के फाईदा?
सिग्मण्ड फ्रेडले मनो-विज्ञानमा ल्याएको योग्दान, हाम्रो जीवनमा त्यसको प्रभाव ठुलो। हाम्रो बुद्धि (मन) तीन तहमा बिभाजित छ।
तस्विर श्रोत: jessicawoods.co.uk
← काेरियाबाट रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि, राजस्व छलेर देश विकास असम्भव
मनोविदलता (SCHIZOPHRENIA) को बारेमा जानौं →